सुशीला कार्की सबैले गर्व गर्नलायक प्रधानन्यायाधीश बन्न सकून् - Ratopati
नेपालमा अहिले एउटा अनौठो संयोग बनेको छ । केही वर्षअघि मात्र पुरुषहरुसरह समान अधिकारका लागि आन्दोलन गर्ने महिलाहरु अहिले मुलुकका महत्वपूर्ण र प्रमुख अंगहरुमा प्रमुख जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।
हालै मात्र सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि मुलुकका प्रमुख तीन महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा महिलाहरु पुगेका छन् । यसअघि राष्ट्रप्रमुख तथा सभामुखको जिम्मेवारी विद्यादेवी भण्डारी र ओनसरी घर्तीमगरले सम्हालिसकेका छन् ।
मुलुकको न्याय क्षेत्रको जिम्मेवारीमा महिला पुग्नुलाई सबै पक्षबाट निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । तथापि यो क्षेत्र आफैँमा जति प्रशंसनीय र सम्मानित छ, त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि । त्यसैले सम्मानसँगै चुनौतीलाई नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कसरी बहन गर्छिन्, त्यसमा सबैको चासो रहेको छ ।
विश्वकै इतिहासमा नेपाल नै यस्तो मुलुक होला जहाँ अधिकार प्राप्तिका लागि सुरु गरिएको आन्दोलनपश्चात् यति छोटो समयमा नै मुलुकका प्रमुख अंगहरुमा महिलाहरुले प्रमुख जिम्मेवारी सम्हालेको त्यो पनि एकैपटक ।
त्यसैले यसलाई सामान्य रुपमा लिनुहुँदैन । तर योसँगै केही चुनौतीहरु समेत रहेका छन् । ती हुन महिलाहरुले पनि पुरुषहरुले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन सक्छन् भनेर प्रमाणित गर्नसक्नु ।
यस्तो हुनसकेमा आगामी दिनहरु पनि नेपालमा महिलाहरुका लागि सहज हुनेछन् । तर यदि यो परीक्षणको घडीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका उच्चपदस्थ महिलाहरु आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने सिलसिलामा चुके भने त्यसले आगामी दिनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउनेछ । तथापि यो परीक्षण हेर्न बाँकी नै छ ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कार्की सरकारको प्रमख अंगमध्येको एक न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्नु महिलाहरुका लागि गर्वको कुरा हो । तर उनले न्यायालयमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छिन्, त्यसले उनका आगामी दिनहरु कति सहज र प्रशंसनीय हुन्छन् भन्ने निर्धारण गर्छं । भलै उनी एउटा महिला हुन्, तर उनी जुन जिम्मेवारीमा छिन् ।
त्यसले महिला वा पुरुष भनेर छुट्याउन मिल्दैन । यति मात्र होइन । उनको न्यायको तराजुमा नजिक वा टाढाको, आफन्त वा पराई भन्ने कुरा पनि छुट्टिनुहुँदैन । तर प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएलगत्तै उनले दिएका केही अभिव्यक्तिले उनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कतै गम्भीर रुपले महसुस नगरेकी हुन् कि ? भन्ने आशंका पनि उब्ज्याएको छ ।
जस्तो उनले जिम्मेवारी सम्हालेपछि महिलाहरुका पक्षमा अलि बढी वकालत गर्नु, सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक शैलीका अन्तर्वार्ता दिनुलगायतको उनको शैली स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको व्यक्तिलाई शोभनीय नहुने भन्दै कतिपयले आलोचनासमेत गरेका छन् । यस्ता विषयमा प्रधानन्यायाधीश सचेत हुन आवश्यक छ ।
उनी जुन भूमिका वा जिम्मेवारीमा छिन्, त्यहाँबाट उनले व्यवहारमा आम जनताले महसुस हुने किसिमका काम गर्नु आवश्यक छ । विगतमा न्यायालयका बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्था किन आयो ? त्यसमा अध्ययन गर्ने र न्यायालयलाई सबैले सम्मान गर्नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन आवश्यक छ । एउटा महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा उनले न्यायालयमा हुने सबै किसिमका विकृति तथा विसंगतिलाई अन्त्य गर्न सकिन् भने त्यो उनीपछि जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेतृत्वलाई पनि एउटा उदाहरणीय काम हुनसक्छ ।
त्यसैले यो उनका लागि परीक्षाको घडि बनिरहेको छ । यसमा उनी कसरी अघि बढ्छिन्, त्यो आगामी दिनमा उनले गर्ने कामले नै पुष्टि गर्नेछ । तथापि उनी एउटा सक्षम र उदाहरणीय प्रधानन्यायाधीश बनेर नेपाली महिलाहरुको मात्र होइन, नेपालकै सानलाई उच्च बनाउन सफल बन्न सकून्, शुभकामना ।